थ्याङ्क यू क्याप्टेन ~ brazesh
थ्याङ्क यू क्याप्टेन
February 25, 2012 कान्तिपुर कोसेली, नेपाली, प्रकाशित3comments
आखिर पछिल्लो हप्ता यो पानीमरुवा पनि हिमाली उडानका लागि चील गाडी चढ्यो । सगरमाथा लगायत गौरीशंकर र अन्य सुन्दर तर डरलाग्दा हिमटाकुराहरुको दुइ नटिकल माइल नजीकै पुग्दा पनि रक्तचाप जस्ताको त्यस्तै रह्यो । त्यतिमात्र होइन, फर्केपछि पनि मलाई डोकाले छोपेर सिस्नुपानी छम्कनु परेन, अर्थात मेरो सातो गएन । लौ त भनौं भने बरु आनन्द नै आयो । (सातो र आनन्द कहाँ, कसरी र किन जान्छन् वा आउँछन् भन्ने चाहिँ मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन है ।)
अरु कुरामा आफूलाई जति सुकै शूरवीर माने पनि हत्पति कसैलाई भनिहाल्न लाज लाग्ने एउटा कुरा के हो भने चीलगाडी चढ्न भने पछि म बबूरोको सातोपुत्लो उड्छ । (सातो के हो भन्ने अलिअलि थाहा भए पनि पुत्लो के हो अनि यी दुइ भाइ कहाँ र कसरी उड्छन् भन्ने पनि थाहा छैन है ।) मलाई सम्झना नै नहुने बेलामा पनि चीलगाडीमा उडेको बेला पेटमा आगो बल्यो भनेर कोलाहल मच्चाएको थिएँ रे भन्ने किम्वदन्ती मैले सुनेका हूँ । जानकारहरु भन्छन्, उँचाइसंग डर लाग्ने मान्छेहरुमा त्यो साधारण हो रे । तर अकिञ्चनलाई त्यो समस्या पनि छैन । तै पनि क्या हो क्या हो, चीलगाडीसंग मेरो पूर्वजन्मको नै ३६ को आँकडा रहेको छ । त्यसैले सकेसम्म मिलेसम्म सडक यात्रा नै मात्र गर्ने र केही लागेन भने मात्र हावामा कावा खाने मेरो पुरानो रोग हो ।
हुन त हवाइ यात्रा सडकको भन्दा बढी सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरो पनि थाहा नभएको कहाँ हो र ? सुरक्षितका साथै आरामदायी पनि हुन्छ, दुर्घटनामा पर्ने डरको समय अवधि कम हुन्छ र कथंकदाचित दुर्भाग्य नै भएछ भने पनि हवाइयात्रीले सजिलोसंग मोक्ष प्राप्त गर्छ, अंगभंग भएर रहनुपर्ने डर हुँदैन, आफ्नाले राम्रै क्षतिपूर्ति पाउँछन् भन्ने कुराहरु पनि मथिंगलमा दर्ता नभएको होइन । आर्थर हेलीको पुस्तक एयरपोर्ट पढेपछि मान्छे सानोतिनो हवाइ विज्ञ बन्छ । हवाइ यात्रा, विमानघाट र चीलगाडीका संचालनका पछाडि कति धेरै सतर्कता र सुरक्षाहरु हुन्छन् भन्ने कुराको सूक्ष्मतम अध्ययन गरेर तिनकै वरिपरिका पात्र र घटनाहरुलाई उनेको त्यो पुस्तक पढेपछि मान्छे ढुक्क हुन्छ र तर यो कुरामा म शायद मान्छे परिनं क्यारे, हेलीले पनि मसंग हार खानु परेको थियो । हवाइयात्रामा गडवड हुने भनेको करोडौंमा एक घटना मात्र हो, त्यो पनि धेरै जसो मानवीय त्रुटिका कारण, नत्र प्राविधिक त्रुटिका कारण दुर्घटना हुने भनेको नगण्य बराबर हो भन्ने पनि यो मूढमगजले पढेको बुझेको हो । तर त्यति हुँदा पनि किन हो चीलगाडी चढे कि हंसले ठाम छाड्ने । (हंसको ठाउँ कहाँ हुन्छ र छोडेर कहाँ जान्छ भन्ने पनि मलाई थाहा नभएको कुरा हो।)
यो असहजताको पछाडि एउटा कारण हुनसक्छ भन्ने मैले आफै टुंगो लगाएको थिएँ । हेक्का हुने बेलादेखि तीनदशकको आयु खाउन्जेल म बारम्वार, नियमित रुपमा हवाइ दुर्घटनाका सपनाहरु देख्ने गर्थें । कहिले म आफै चढेको चीलगाडी दुर्घटना हुन्थ्यो, कहिले म त्यसको प्रत्यक्षदर्शी हुन्थें । कहिले टथ्र्यो, कहिले डरलाग्दोसंग दुर्घटना ग्रस्त हुन्थे मेरा सपनाका चीलगाडीहरु । एकतमास हप्तामा दुइ वा तीनपटकसम्म बर्षौं देखेका त्यस्ता सपनाहरुले सम्भवत मेरो आलोकाँचो मगजमा कुनै अमिट प्रभाव पारेका हुनाले नै म विवेक र तर्कसंग हार्ने गरेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्थ्यो । दशौबाह्रौं घण्टा इस्पाते चरोको पेट भित्र आफू रहनुपर्ने कल्पना नै गर्न नसकेका कारण मैले एकदुइवटा विदेश यात्राहरु नै रद्द गरेको छु । छोटा यात्राहरुमा पनि पाएसम्म टिन्चु पानी लगाएर रनक्क भएपछि मात्र म त्यो हववाइजहाज भन्ने जिनिस भित्र छिरेको हुन्छु । अनि त्यहाँ भित्र पनि हनुमान चालीसा र गायत्री मन्त्र जप्नु त मेरो लागि त्यति नै आवश्यक हुन्छ, जति उडान अघि पाइलटहरुले विमानका आभारभूत कुराहरु जाँच गर्नु ।
केही दिन अघि विद्यालयका साथीहरुको एउटा जमघट भएको थियो । एसएलसी दिएर बाटो लागिसकेपछि कहिले कुनै दोबाटो चौबाटोमा नठोक्किएका कतिपय मित्रहरु बीसौं वर्षको अन्तरालमा भेटिएका थिए । तिनै मित्रहरु मध्ये एउटा थियो क्याप्टेनसाब । क्याप्टेन रविन्द्र डंगोल । ऊ आजकल वरिष्ठ पाइलट र उडान प्रशिक्षक समेत भैसकेको रहेछ । त्यो जमघटका लागि पनि ऊ बिहानै लुक्लाको दुइवटा उडान भ्याएर आइपुगेको थियो । मैले उसलाई हरेक दिन उड्नु, अनि लुक्ला जस्तो संसारको सबै भन्दा खतरनाक मानिएको विमानघाटमा बारम्बार ओर्लन कतिको डर हुन्छ भन्ने प्रश्न गरें । कुनै गृहिणीलाई बिहानबेलुकै ग्यासको सिलिण्डर जस्तो विष्फोटक पदार्थको सान्निध्यमा खाना पकाउन कत्तिको डर हुन्छ भन्ने सोधे जस्तो उसले मलाई अचम्म मानेर हे¥यो । आफूलाई त्यो प्रश्नको कल्पनाले नै डर लागेको थियो तर उसले ओठ लेप््रयाएर केही हुँदैन भन्ने उत्तर दियो । मैले आफ्नो उडानसंगको डरको कुरा सुनाएँ र उसको मुटु मेरो भन्दा बेग्लै कच्चा पदार्थले बनेको हुनुपर्छ भन्ने ठहर पनि बताएँ । रविन्द्रले हाँस्दै भन्यो,
“पख्, तंलाई एक दिन मैले उडाउने फ्लाइटमा लैजान्छु र तेरो डरको औषधि गर्छु ।”
कुरो त्यत्तिमै सकिएको थियो । त्यो जमघटको महीना दिन जति भैसकेको थियो । म पनि ढुक्कै थिएँ । साँच्चै उसले मलाई जाऊँ भन्यो भने मलाई पापसंकट हुन्थ्यो । बालसखाको सामु डराएर जान्नं भन्न आफ्नो स्वाभिमानले नदिने, जाऊँ भने कसरी जाने । कुरै नउठेपछि टण्टै साफ । कुनबेला कुन सुरमा औपचारिकताका लागि भनेको कुरा रविन्द्रलाई के हेक्का रहला र । म उसको स्मरणशक्तिलाई न्यून मूल्यांकन गरेर ढुक्क भएको रहेछु । अघिल्लो शनिवार बेलुका फोन गरेर उसले उर्दी लगाइदियो,
“ल भोलि बिहान ६ बजे एयरपोर्ट पुग्ने, म तंलाई माउण्टेन फ्लाइटमा लैजान्छु ।”
मेरो हंसले ठाउँ छोड्यो । उडान, त्यो पनि माउण्टेन फ्लाइट ? मैले आल्याङटाल्याङ गर्न थालेको मात्र के थिएँ, त्यो बुझेर होला उसले उर्दीलाई अझ कडा बनायो ।
“यसो गर्, म अफीसको गाडीलाई मलाई लिन नआइज भन्छु । तं आउँदा मलाई पनि पिक अप गर् । संगै जाउँला ।”
मैले केही भन्नु अघि फोनले एकतामसले टुँइटुँइ गरेर सम्पर्क विच्छेद भएको संकेत दिन थालिसकेको थियो । मलाई रातभर निन्द्रा लागेन । तर उम्कने बाटो नभएपछि वाध्यताले बिरालोलाई पनि बाघ बनाउँदो रहेछ । भोलिपल्ट बिहानै धूप बालेर भगवान गुहार्दै म अन्ततोगत्वा हिमाली उडानका लागि रविन्द्रको पुच्छर लागेर विमानघाट पुगें । उसले उड्नु अघि मलाई विमानका बाहिरी भागका वनौट र सुरक्षा प्रणालीहरुका बारेमा बतायो । मौसम र वादलहरुका बारेमा बतायो । वादलभित्र प्रवाह हुने विद्युतीय तरंगहरुले यदि विमानलाई भेट्टाएमा तिनलाई डिस्चार्ज गर्नका लागि के कस्ता प्रविधिहरु बाहिरै रहन्छन् भनेर देखायो, विमानको आकार किन त्यस्तो हुन्छ, झ्यालढोक किन त्यस्ता हुन्छन् भन्ने बताइसकेर उसले मलाई भित्र लग्यो ।
ककपिटका रंगीचंगी बटनहरु, सानासाना स्क्रिनहरुको बारेमा जानकारी दिंदै अहिलेको उन्नत प्रविधिका कारण उडान झनै कति सहज र सुरक्षित भएको छ भनेर मेरो घैंटामा घाम लगायो । दुईवटा इन्जिन एकार्काका परिपूरक हुँदाहुँदै कसरी एकार्कासंग पटक्कै सम्वन्धित हुँदैनन् र कथंकदाचित एउटाले काम नगरे पनि अर्को त्यसबाट कसरी अछूतो रहेर उडान सुरक्षित रहन्छ भन्ने दिव्यज्ञान पनि दियो । अर्थर हेलीको किताब पढेर आफूलाई हवाइ विज्ञ भएको भ्रम पालेको मेरो ज्ञान कति सीमित रहेछ त भने हामीले को पाइलट भन्ने मान्छेलाई खासमा फस्र्ट अफीसर भनिन्छ, को पाइलट भन्ने त पद नै हुँदैन रहेछ । कसले भन्छ स्कूल कलेज सकिए पछि पढाइ सकिन्छ ? संसार नै एउटा स्कूल हो र हरेक दिन कक्षा, भेटिने हरेक मान्छे शिक्षक अनि हरेक पल पढाइ हुन्छ । को बाट के कति सिक्ने अथवा नसिक्ने भन्ने त आफ्नै हातमा हुन्छ । क्याप्टेन रविन्द्र नामक मेरो त्यस दिनका शिक्षकले कम्प्यूटराइज्ड उपकरणहरुले राडार र नियन्त्रण कक्षसंग संयोजनमा रहेर पूरा उडान कसरी सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा पनि घोटेर मेरो मगज भित्र खन्यायो ।
सैद्धान्तिक रुपले म निकै हदसम्म आश्वस्त भैसकेको थिएँ । तर गाँठी कुुरो त उड्नु थियो । पेप ग्वार्डेलाले फुटवलको रणनीतिको बारेमा भनेको सुन्नु र मैदानमा मेस्सीसंग खेल्न उत्रनु फरक कुरो हो, भनेर मैले उसलाई भनिंन । बडो धीरगम्भीर मुद्रामा उसका कुराहरु सुनेर हुँ..हुँ मात्र गरिरहें । तर पनि मेरो सातौं इन्द्रियले मलाई अरु बेलाका उडानमा जस्तो मेरो हालत निरीह हुँदैन भन्ने संकेत दिइसकेको थियो । नभन्दै उडानमा पनि उसले केही बेर ककपिटको छेउमा राखेर मलाई व्यावहारिक रुपमा उडानको सहजता र सुरक्षाका बारेमा ज्ञान दियो । पहिलोपटक मैले हवाइ उडानको असली आनन्द उठाएँ किन भने बषौं देखि दुःख दिइरहेको ट्यूमरलाई कुनै दक्ष चिकित्सकले काटेर फ्यालेजस्तो रविन्दले मेरो डरलाई निर्मूल बनाइसकेको थियो । त्यसदिन मैले उडान अवधिभर हनुमान चालीसा र गायत्री मन्त्र पाठ गरिनं । हिमाल, पहाड, वादल र आकाशको सान्निध्यमा उन्मुक्त चराझैं कावा खाएर जमीनमा ओर्लने बेलामा म उडानसंग नडराउने मान्छे बनिसकेको रहेछु । अब आइन्दा चीलगाडी चढ्नुपर्दा मेरा गोडाहरु काम्ने छैनन् भन्ने मलाई विश्वास छ ।
त्यसका लागि थ्याङ्क यू क्याप्टेन
shib February 25, 2012 at 6:14 PM
उत्कृस्ट ,धेरै राम्रो
sadikshya February 27, 2012 at 12:54 AM
Pramod Choraria February 28, 2012 at 2:16 AM
Well written and well expressed !!!! Brazesh Congrats !!!!!